Satria Mihataka Amin’ireo Fikambanana Momba Ny Zon’olombelona i Rosia, Mipoitra Ny Fanapahankevitra Amin’ny Fanarahamaso Ataon’ny Fanjakana · Global Voices teny Malagasy
Satria Mihataka Amin'ireo Fikambanana Momba Ny Zon'olombelona i Rosia, Mipoitra Ny Fanapahankevitra Amin'ny Fanarahamaso Ataon'ny Fanjakana
Voadika ny 09 Febroary 2016 6:42 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский, Español, English
Namoaka didy ny ECHR fa ny rafitra fanarahamaso an'ny SORM any Rosia, izay misambotra an-tsokosoko ny fifandraisana an-telefaonina sy ny aterineto, dia “tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny ‘kalitaon'ny lalàna’, ary tsy mahavita mitazona ny ‘fitsabahana’ ho amin'izay ‘ilaina ao anaty fiarahamonina demokratika.'” Sary avy amin'i Tristan Schmurr ao amin'ny Flickr. CC BY 2.0.
Niara-nanapaka ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona tamin'ny herinandro lasa fa manitsakitsaka ny foto-pisainana momba ny zon'olombelona any amin'ny faritra ny fomba fanao amin'ny fanarahamaso elektronika ao Rosia.
Ny 4 Desambra 2015, tamin'ny raharaha iray nentin'ilay mpisolovava momba ny zon'olombelona, Roman Zakharov, nambaran'ny fitsarana fa nandika ny Andininy faha-8 (zo hanajàna ny fiainana sy ny fifandraisana manokana ) ao anatin'ny Fifanarahana Eoropeana momba ny Zon'olombelona ny Federasionan'i Rosia, amin'ny famelàna hisambotra an-tsokosoko tsy misy fepetra ny fifandraisana an-telefaonina ataon'ny sampan-draharahan'ny fiarovana ka tsy misy alàlana mialoha avy amin'ny fitsarana araka ny lalàna ao amin'ny fireneny.
Na dia mety tsy hahagaga ho an'ny ankamaroan'ny mpamaky aza izany, mety tsy hanana fiantraikany firy noho ny teo aloha ny fiantraikan'izany fanapahankevitra izany ho an'i Rosia, noho ny rafitra vaovao ara-dalàna izay mamela ny governemanta tsy hiraharaha mandrakariva ny fanapahankevitra toy zany avy amin'ny fitsarana iraisam-pirenena sy isam-paritra momba ny zon'olombelona.
Ao anatin'ny politika vaovao nosoniavin'ny Filoha Putin tamin'ny 15 Desambra, manana ny fahamboniana ofisialy ankehitriny ny Fitsarana momba ny Lalàm-panorenana any Rosia, manindry ny didy navoakan'ireo fikambanana iraisam-pirenena momba ny zon'olombelona. Amin'ny tranga toy ity, raha toa ka misy fifanolanana eo amin'ny fanapahankevitry ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona sy ny Lalàm-panorenana Rosiana, araka ny nandikàn'ny Fitsarana azy, ny Lalàm-panorenana Rosiana no handresy.
Roman Zakharov v. Russia (appl. no. 47143/06) no nentin'i Roman Zakharov, talen'ny foibem-paritra ho an'ny “Foundation” Glasnost misahana ny Fiarovana any Saint-Pétersbourg, izay ny tanjony dia ny fiarovana ny fahalalahana miteny any Rosia. Nanamafy i Zakharov fa araka ny lalàna Rosiana, voahitsakitsaka ny zony fototra, satria nisambotra an-tsokosoko ny fifandraisany an-telefaonina ireo manampahefana, araka ny SORM-2 (Rafitra Hetsika ho an'ny Fanadihadiana-2).
Lalàna maro no nametrahan'i Zakharov ny fitarainany, anisan'izany ny Lalàna momba ny Hetsika Fikarohana tamin'ny 1995, ny Fehezandalàna momba ny Heloka Bevava tamin'ny 2001, ary ny Didy hitsivolana Faha 70 navoakan'ny Ministeran'ny Serasera, izay mitaky amin'ny tambajotra fifandraisan-davitra mba hametraka ny fitaovana hahafahan'ny sampan-draharaha misahana ny fampiharana ny lalàna hanao fanarahamaso midadasika be.
Nolavin'ny fitsarana Rosiana ny fitarainan'i Zakharovs, heveriny fa “tsy nahomby ny fanaporofoany fa nosamborina an-tsokosoko ny resany an-telefaonina na hoe nomen'ireo mpandraharahan'ny finday ho an'olona tsy nahazo alalana ny torohay voaaro” (nampiana fanamafisana). Tsy fanambarana nanafintohina izany ho an'ireo olona efa zatra ny fanambin'ny fanarahamaso ataon'ny NSA any Etazonia. Noho ny haben'ny fanarahamaso ataon'ny governemanta, tsy afaka nanaporofo i Zakharov hoe nokendren'ny governemanta manokana ny tenany.
Na izany aza, tsy nampihozongozona ny fihevitr'i Zakharov teo anoloan'ny Fitsarana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona izany. Nanamafy ny fitsarana fa “manana zo hilaza ho niharam-boina tamin'ny fandikàna ilay Fifanarahana i Zakharov, na dia tsy afaka milaza aza izy ho fanohanana ny fangatahany fa nanaovana fanarahamaso marina.” Tamin'ny fanambarana an-gazety nivoaka momba ny hevitra, nivelatra kokoa tamin'ny tsoakeviny ny Fitsarana:
Araka ny maha zava-miafina ny fepetra fanaraha-maso nomen'ny lalàna, ny fiantraikany lasa lavitra… ary ny tsy fisian'ny fomba mahomby hanoherana izany eo amin'ny firenena […], heverin'ny Fitsarana fa ilaina izany mba handinihana ny lalàna sahaza, nefa tsy amin'ny ohatra manokan'ny fanaraha-maso, fa ao anatin'izay saro-takarina. Ankoatra izany, heverin'ny Fitsarana fa tsy tokony hanaporofo Atoa Zakharov hoe notandindonin-doza izy tamin'ny nisamborana an-tsokosoko ny fifandraisany. Eny tokoa, satria ny rafitra eo an-toerana tsy nitondra vahaolana mahomby ho an'ny olona izay niahiahy fa izy dia iharan'ny fanarahamaso miafina, ny tena fisian'ny lalàna voatsikera mihitsy no mahatonga ny fitsabahana amin'ny zo an'Atoa Zakharov, araka ny Andininy faha-8 [ao amin'ny Fifanarahana Eoropeanina Momba ny Zon'olombelona].
Nony farany, namoaka didy ny fitsarana “fa tsy mahafeno ny fepetra takiana amin'ny ‘kalitaon'ny lalàna’ ny lalàna Rosiana.” “Midika izany fepetra izany fa tsy hoe fotsiny tokony ho azo raisina ary azo fantarina mialoha ny fampiharana ilay lalàna anatiny, fa tsy maintsy ihany koa miantoka fa ireo fepetra fanarahamaso miafina dia tsy ampiharina raha tsy rehefa ilaina ao anatin'ny fiarahamonina demokratika iray,’ indrindra amin'ny alalan'ny fitsinjovana fepetra fiarovana mifandraika sy mahomby ary antoka hiarovana amin'ny fanararaotana.”
Nasongadin'ilay fanapahankevitra ny tsy fisian'ny fepetra fiarovana mifandraika sy mahomby ary antoka hiarovana amin'ny fanararaotana ao anatin'ny lalàna Rosiana. Ankoatra ny zavatra hafa, nomraihany fa ahafahana manao fanarahamaso midadasika be raha ny marina ireo fepetra Rosiana tsy nasiana fandinihana kely akory, tsy mikendry olona sy/na laharana telefaonina voafaritra manokana. Mifanohitra amin'ny fanarahamaso maro hafa eto amin'izao tontolo izao, ny politika dia tsy mitaky amin'ireo manampahefana mba hanome fanamarinana mafy orina ho an'ny fanarahamaso. Tsy mitaky azy ireo hametra ny faharetan'ny fanarahamaso tahàka izany ilay izy, na mitsinjo fepetra manokana momba ny fitehirizana na ny famotehana ny angon-drakitra nangonina, any aoriana any.
Nanamarika ny fisehoan-javatra ihany koa ny fitsarana hoe rehefa nolavina teo anatrehan'ny fitsarana izany, ny fangatahana fanafoanana dia natao ho an’ ireo izay afaka manaporofo ny fisamborana an-tsokosoko ihany, hetsika sarotra tanterahana nohon'ny fironan'ny governemanta Rosiana amin'ny fanarahamaso ny vahoaka iray manontolo, fa tsy mikendry olon-tokana.
Tsy neken'ny Fitsarana ny fanomezana onitra ho an'i Zakharov, fa nomena EUR 40.000 ho an'ny fandaniana rehetra. Nilaza ny fitsarana tamin'ny fanambarana an-gazety fa “efa fanonerana ampy sy sahaza ho an'ny fahavoazana ara-moraly nanjo [azy] ny fahatsapana ny fisian'ny fanitsakitsahana.”
Ny mpisolovava an'i Zakharov avy amin'ny Foibe ho an'ny Zon'Olombelona “Memorial”, Kirill Koroteev, dia mino fa hahafahana manome fanazavana amin'ny ilàna ny fanavaozana ny lalàna fihainona an-tsokosoko any Rosia io fanapahankevitra io. Indrisy anefa, na izany aza, ny tena mety ho vokatr'io fanapahankevitra io ao anatin'ny Federasionan'i Rosia dia ny hahitàna azy ho foana aorian'ny fanitsiana ny lalàm-panorenana.
3 andro izayOkraina
1 herinandro izayBosnia Herzegovina